अब सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी ! – Ramailo Sandesh
अब सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी ! काठमाडौं । को-रोनाले देशका सम्पुर्ण यातायात छेत्रलाई तहस नहस पारिरहेको बेलामा सरकारले दुई जनासम्म यात्रु राखेर काठमाडौ उपत्यकामा ट्याक्सी सन्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुई जनासम्म यात्रु राखेर ट्याक्सी चलाउन दिनेमा सकरात्मक देखिएको हो । तर, निर्णय भने भैसकेको छैन । यसबारे छलफल गर्न कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी) लाई जिम्मा दिइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।